आज ठुलो तीज को दर खाने दिन-बरिस्ठ सेफ लक्ष्मण भण्डारी – newslinesnepal
आज ठुलो तीज को दर खाने दिन-बरिस्ठ सेफ लक्ष्मण भण्डारी
प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०७६, आईतवार ०९:२२
-बरिष्ठ सेफ लक्ष्मन प्रसाद भण्डारी
कहाँमा जान्छौं रानी चरी वगाल? वरिलै भगवानलाई भेटन ।
भगवानलाई भेटदा के के पाहुर ल्याउँछौं रु वरिलै फुतपाती अछेती
दैलो मुनीको,कागतीको विरुवा, रिमीझिमी पानीमा सारौं वरिलै
तिम्रो हाम्रो मायाँ प्रेम वस्यो, धिरे धिरे मायाँ मारम वरिलै ।
यसपालिको तिजमा दाजै लिन आएनन अग्लो डांडा हेरि हेरि रोए बरिलै
जस्ता गित कता हराए र ? कता हराए ति अरु पुराना भाका र पुरानो दर खाने परम्परा ? तिजका लय समेटिएका शब्दहरु
‘’’ससुरा ले भन्नु हुन्छ दाइजो थोरै ल्यैकि हुन सासुले भन्नु हुन्छ दाइजो ल्येनिन ।
वर्ष दिनको तिजमा बाबा लिन आउदा ,यो घरको चटारोले अघि लाई जान पईन
वर्षा दिन का तिज मा दाजै लिन आउँदा,यो घरको चटारोले अघि लाई जान पाईन
हुन त अहिले तिजलाई पार्टि प्यालेस,होटल तथा रेस्टुरेण्ट हरुमा मनाउने प्रचलन भएको छ । यो संस्कृतीको जगेर्ना गर्ने भन्दा पनि संस्कृती विग्रने स्थिती होइन र ? तिजको नाममा ड्रिङ्स पार्टि, वायिन पार्टी तडक भडक वढि भयो ।
दर भनेको त सुद्ध साकाहारी ढकनी ,तामाको तरकारी, काक्राको अचार,अनदीको खाजा लगायत खाएर मनाईने परम्परा हो । दर भनेको तीजको अघिल्लो दिन परिवारका महिला सदस्यहरूले खाने मीठो मिठो परिकार हो । दरका रूपमा चौरासी व्यञ्जन तयार गरिन्छ । तर पनि ढकनीलाई दरबाट हटाउने हो भने त्यो दर हुनै सक्दैन । किनभने संस्कृति भनेको परम्परा हो र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसकारण ढकनीलाई दरमा समावेश गर्न नबिर्सौं ।
१० – ११ जनाको लागि ढकनी तयार पार्न
ढकनी बनाउन चाहिने सामग्रीहरू
घिउ ३०० ग्राम,
चिनी ४०० ग्राम
ड्राई फ्रुट्सस९काजु ,बदाम ,किसमिस ,क्षुवारा २५० ग्राम
ल्वाङ, सुकमेल, मरिच एवं अलैंचीको जैफल को धूलो ।
कसौडीमा घिउ तताउने । तताइएको घिउमा भिजाएको चामल हालेर सानो आँचमा भुट्ने । खैरो भएपछि एकछिन सेलाउन दिने । सेलाएपछि माथिबाट दूध हालेर सानो आँचमा पकाउने । छोपेर चलाउने ।
चामल राम्रोसँग पाकेपछि त्यसमा रहेको दूध सुक्न दिने र चिनी हालेर राम्रोसँग चलाउने । गलमय शुभकामना १ सबै का पोइ राम्रा होउन ,नभएका ले राम्रा पाउन भन्ने पूर्ण आशा श्री पशुपति नाथ संग राख्दै उपवासमा पानी अत्यधिक पिउ १
(सेफ लक्ष्मन प्रसाद भण्डारी ग्लोबल नेप्लिज सेफ फेडेरेशनका अध्यक्ष हुन् । )